20 Siyaabood oo lagu kasban karo Mawqifkaaga Mawqifku inuu kafiican yahay Tartamehaaga | Martech Zone
Waa iga yaabis intee in le’eg ayay shirkadaha shaqo ee adag geliyaan istiraatiijiyad ka kooban iyagoon weligood eegin boggaga iyo bogagga tartamaya. Uma jeedo tartamayaasha ganacsiga, waxaan ula jeedaa tartamayaasha raadinta dabiiciga ah. Adeegsiga aalad sidaXeebaha, shirkad ayaa si fudud u sameyn karta falanqeyn tartan ah oo udhaxeysa boggooda iyo goobta lagu tartamayo si loo aqoonsado shuruudaha keenaya taraafikada loo tartame ee ah inuu, taas bedelkeeda, u horseedo degelkooda.
In badan oo idinka mid ah ayaa laga yaabaa inay fekerayaan dib u xirid waa inuu noqdaa istiraatiijiyad, waan diidi lahaa. In kasta oo dib-u-xiriirintu ay sababi karto darajooyin badan mudada gaaban, dhibaatadu waa taas Maqaallo wanaagsan markasta wuu guuleysan doonaa mustaqbalka fog. Ujeeddadaadu waa inay noqotaa inaad abuurto waxyaabo si aan dhammaad lahayn uga wanaagsan waxa ay barta tartame soo daabacday. Markaad qabato shaqo ka fiican tii ay qabteen, waad samayn doontaa kasban xiriiriyeyaal wixii ka dambeeya wixii aad waligaa gacanta ku qaban kari lahayd.
Ross Hudgens oo ka tirsan warbaahinta Siege Media wuxuu leeyahay qoraal faahfaahsan oo ku saabsan sida loo kordhiyo taraafikada websaydhka 250,000+ booqasho bille ah leh infographic ku saabsan sida loo qiimeeyo waxyaabaha ka wanaagsan. Shakhsi ahaan, anigu dan kama lihi inaan helo tanno booqdayaal ah oo ku soo booqda goobta sida aan u daneeyo dadka soo-booqdayaasha tayada leh oo is-qoridoona, soo noqda, oo beddela Laakiin infographic waa nugget of gold maxaa yeelay waxay qeexaysaa sida ugu wanaagsan ee loo qiimeeyo waxyaabahaaga. Kani waa istaraatiijiyad aan marwalba ku daadino istiraatiijiyaddeena mawduucyada macaamiisha.
Sida Loogu Kala Darajo fiicnaado Mawduucyada
Slugga Boostada - wax ka beddel isugeynta boostada oo URL-gaaga ka dhig mid gaagaaban. U fiirso sida URLkani u yahay boggayaga marka lagu daro sida-loo-darajo-content-fiican, URL fudud, oo xusuus mudan in dadka isticmaala mashiinka raadinta ay aad ufudud u tahay inay gujiyaan oo xitaa wadaagaan.
Noocyada Mawduuca - maqalka, sawirada, animations, contentive interactive, video… waxkasta oo aad sameyn karto oo ka dhigaya waxyaabahaaga mid muuqda oo si fudud loola wadaagi karo ayaa kasbanaya fiiro gaar ah. Waa maxaan u jecel nahay una horumarinaa micro-graphics-ka ayaa loogu talagalay warbaahinta bulshada.
Title Title Isticmaalka ereyada muhiimka ah waa muhiim, laakiin sameynta cinwaan u qalma gujinta waa istaraatiijiyad weyn. Waxaan badanaa daabacnaa cinwaan bog ka duwan cinwaanka maqaalka, oo si gaar ah loogu habeeyay raadinta. Fadlan ha ku habeynin isticmaaleyaasha raadinta cinwaannada aan khuseyn, in kastoo. Waxaad waayi doontaa kalsoonida lagu qabo martidaada.
Qoraal Fudud - Waxaan iska ilaalinnaa ereyada murugsan iyo soo-gaabinta warshadaha sida ugu macquulsan - illaa aan ku darno qeexitaannada iyo sharaxaadaas si aan u caawino martideena. Ma isku dayeyno inaan ku guuleysano abaalmarin suugaaneed waxyaabaha aan ka koobannahay, waxaan isku dayeynaa inaan mowduucyo adag ka dhigno mid si sahlan loo fahmi karo. Ka hadalka heer kasta oo booqde ah uu fahmi karo waa muhiim.
Qaab dhismeedka bogga - Mawduuca kaalinta koowaad ku jira ayaa leh liis garayn 78% waqtigaas ah. Abaabulka boggaaga qaybo si fudud loo fasixi karo waxay u oggolaaneysaa akhristayaasha inay si fudud u fahmaan. Akhristayaashu way jecel yihiin liisaska maxaa yeelay waxay baarayaan oo si fudud ayey u xusuusan karaan ama u hubin karaan waxyaabaha ay u baahan yihiin ama ay iska iloobeen.
Farta la aqrin karo - Isku hagaajinta cabbirka cabbirkaaga marka loo eego qalabka waa muhiim maalmahan. Go'aannada shaashadda ayaa labanlaabmaya dhawrkii sannaba mar, sidaa darteed noocyada qoraalka ayaa sii yaraanaya oo sii yaraanaya. Akhristayaasha indhuhu way daalan yihiin, ee si fudud ugu fududaato oo fartaaduna ha weynaato. Celceliska cabirka font ee darajada # # 1 waa 15.8px
Waqtiyada Xawaaraha Degdega ah - Ma jiraan wax dila waxyaabahaaga sida waqtiyada xamuulka oo gaabis ah. Waxaa jira tan ah arrimaha saameeya xawaaraha boggaaga, oo waa inaad si joogto ah ugu dadaashaa wakhtiyo dhaqso iyo dhaqso badan.
Muuqaallada - Qiyaasta celceliska maqaalka marka hore waxay laheyd 9 sawir oo kujira bogga dhexdiisa sidaa darteed oo ay kujiraan muuqaalo, jaantusyo, iyo jaantusyo kalifaya lana wadaagi karo ayaa muhiim ah.
Photos - qabashada isla sawirada saamiyada sida kun meelood oo kale kama caawineyso inaad abuurto farriin gaar ah. Markii aan u helno sawir qaadahayaga inuu toogasho la sameeyo shirkadaha aan la shaqeyno, waxaan sidoo kale ka dalbanaa inay qaataan boqol ama ku soo bandhigaan tallaalada hareeraha xafiiska iyo dhismaha. Waxaan rabnaa sawirro soo jiidasho leh oo kala soocaya macmiilka kuwa la tartamaya. Sawirada tayada sare leh waxay helayaan boqolkiiba 121% dheeraad ah
Badhamada Share sabayn - Abuuritaanka waxyaabo aad u fiican kuma filna haddii aadan fududeyn in la wadaago waxyaabahaas. Waxaan uga fududeynaa badhamada loogu talagalay bidixda, bilowga, iyo dhamaadka qayb kasta oo ka kooban. Oo way shaqaysaa!
Infographics - Shaashadaha waaweyni waxay dalbanayaan sawirro qurxoon, waaweyn ama muuqaal qurxin qurux badan leh. Ma soo saarayno faahfaahin ballaaran maxaa yeelay way adag tahay in lala wadaago bogagga kale. Soo saarista sawirro cajiib ah kuwaas oo dhaadheer oo muuqaal ahaan aad u sarreeya waxay naga caawinaysaa labadeenaba inaan soo jiidano, sharaxno, isla markaana aan badalno soo booqdeyaal badan oo badan.
Links - Daabacado badan ayaa iska ilaaliya xiriidhada dibadda uga baxa qiime kasta ha ahaatee waxaan aaminsanahay inay taasi qalad tahay. Marka hore, siinta xiriiriye nuxur qaali ah oo dhagaystayaashaadu ubaahanyihiin waxay sare uqaadeysaa qiimahaaga inaad tahay maamule iyo khabiir iyaga ah. Waxay muujineysaa inaad fiiro gaar ah u leedahay oo aad qadarinayso waxyaabaha ku jira. Marka labaad, iyadoo la adeegsanayo algorithms-ka la cusbooneysiiyay ee raadinta, ma aanan arag wax hoos u dhac ku yimid awoodeena oo leh tanno xiriirro dibedda ah.
Dhererka Maaddada - Waxaan sii wadeynaa inaan ku riixno qorayaasheena sidii ay u heli lahaayeen maqaallo sharraxaya oo waxtar leh oo ku saabsan mowduucyada. Waxaan ku bilaabi karnaa xoogaa dhibco fudud ah oo akhristaha u iskaan karo ka dibna isticmaalno cinwaano hoose si aan ugu qeybiyo bogagga qaybo. Waan saydhaynaa xoog iyo xoojin ku calaamadee isticmaalka oo dhan si aad u soo jiito akhristaha
La Wadaag Bulsho - Kaliya ma wadaageyno waxyaabahayaga hal mar, waxaan wadaagnaa waxyaabahayaga marar badan marinnadayada bulshada. Warbaahinta bulshada waa sida calaamadeeyaha oo ay dadku inta badan ku ogaadaan waqtiga dhabta ah. Haddii aad daabacday maqaal ka baxsan waqtiga uu raacayo fiiro gaar ah, waad lumisay.
Ka dhig Mawduucaaga - Qayb muhiim ah oo ka mid ah dhagaystayaasheena waa dadka aan soo booqan bartayada - laakiin waxay akhriyaan joornaalkayaga ama waxay ka jawaabeen meel ka mid ah sheekooyinka ay xiisaha ka heleen. La'aan joornaal ama shirkad xiriir la leh dadweynaha oo ku riixeysa waxyaabahayaga dhagaystayaal khuseeya, ma la wadaagi lahayn wax badan. Haddii aan nala wadaagin, naguma xirna. Haddii aynaan xiriir la yeelanayn, derejo kuma soconno.
Sida loo Darajeeyo Nuxurka XATAA Wanaagsan
Waan jecel nahay liiskan, laakiin waxaan rabnaa inaan wadaagno dhowr shay oo la iska indhatiray laakiin aad iyo aad u muhiim ah:
author - Ku dar qoraagaaga bio bogaggaaga. Maaddaama akhristayaashu baadi goobayaan maqaallada oo ay wadaagaan, waxay rabaan inay ogaadaan in qof khibrad u leh uu maqaalka qoray. Qayb ka mid ah waxyaabaha aan qoraaga lahayn looma kala soocin sida ugu badan ee leh qoraaga, sawir, iyo noolaha noo keenaya sababta loo dhageysanayo.
Qaababka moobiilka - Haddii boggaagu uusan ahayn mid si fudud loo akhrin karo, sida la mid ah qaabka Google ee Accelerated Mobile Page (AMP), waxaa laga yaabaa inaadan ku qiimeyn doonin raadinta moobiilka. Raadinta moobiilkuna si aad ah ayey u kordhayaan.
Cilmi Baadhista Koowaad - haddii shirkaddaadu leedahay macluumaad warshadeed lahaansho oo qiimo ku yeelan kara rajadaada, qodo oo soo bandhig falanqeyn dadweyne. Cilmi-baarista aasaasiga ah waa miino dahab ah waxaana si joogto ah loogula wadaagaa khadka tooska ah. Waqti ku habboon, xogta dhabta ah waxay ku jirtaa baahi weyn oo ay u qabaan daabacadaha warshadaha, saamileyaasha, iyo xitaa tartamayaashaada.
Daraasad Dugsi Sare ah - fiiri xagga hoose ee xogtan oo waxaad arki doontaa inay sameeyeen cilmi-baaristooda - iyagoo raadinaya in ka badan darsin ilo cilmi-baaris asaasi ah oo sawir cad ka bixinaya waxa loo baahan yahay in la gaaro. Mararka qaar kaliya abaabulka iyo soo bixida dahabka waxay ku siineysaa dhammaan macluumaadka rajadaadu raadineyso.
Bixi dallacaad - dhiirrigelinta raadinta lacag bixinta, dhiirrigelinta bulsheed ee lacag bixinta, xiriirka dadweynaha, xayeysiinta waddanku… kuwan dhammaantood waa adag yihiin, bartilmaameedsan yihiin, maalgelin maalmahan. Haddii aad ku dhex socoto dhibaatada abuuritaanka waxyaabo aad u wanaagsan - waxaad ugu fiicnaan laheyd miisaaniyad si aad u kobciso!
Tags: dhererka contentsize sizeimagesisku xirkaMacluumaadka Suuqgeyntaraadinta dabiiciga ahdarajaynta raadinta dabiiciga ahxiriiriyeyaal dibedda ahcinwaanka boggasawirodhajinta slugdarajoSEOcinwaanka seobadhamada wadaagurl
Apr 12, 2016 at 10: 18 PM
Runtii Boosto Weyn. waxaan jeclahay infographic-ka sida aan ugu abuuri karno UI wax soo saar.
Apr 15, 2016 at 4: 24 PM
Jeclow maqaalkan Dougie! macluumaad aad u muhiim ah 🙂
Apr 16, 2016 at 1: 34 PM
Inta badan aasaasiga, laakiin runtii faahfaahin muhiim ah. Waad ku mahadsantahay inaad na xasuusisay waxa muhiimka ah.
Mid ku dar waa inaad xasuusataa inaad cinwaanadaada ka dhigto mid qiiro leh. Xusuusnow cidda bartilmaameedkaagu yahay waxna ka qabato dhibcaha xanuunka iyaga oo leh rafcaan dareen leh.
Jawaab celin weyn Annie iyo aniga gebi ahaanba waan isku raacnay! Taabashada shucuurta waa qaab awood leh oo lagu dhiirrigeliyo akhristahaaga.